गृहपृष्ठ » मनोरञ्जन » भारती सिंहले १५ किलो तौल घटाइन्, तरिका के अपनाइन् ?
नयाँ दिल्ली । भारतीय हास्यकलाकार भारती सिंह ( Bharti Singh ) ले आफूले १५ किलो तौल घटाएको बताएकी छिन् । भारती सिंहले एक साक्षात्कारमा आफूले इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्ने र आफू यति धेरै तौल कम गर्न सफल भएकोमो चकित भएको बताइन् ।
हुन त धेरैजसोलाई फास्टिङ अर्थात् ब्रतबारे थाहा छ तर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको अर्थ निश्चित घण्टासम्म खाना नखानु हो ।
जोन होपकिन्स मेडिसिनका अनुसार डाइटिङ गर्दा मानिसहरु के खाने, के नखाने भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छन् तर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले भने तपाईंले कहिले खाने भनेर जानकारी दिन्छ ।
जोन होपकिन्स मेडिसिन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था हो ।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्दा तपाईं एक दिनमा निश्चित घण्टामात्रै खान सक्नुहुन्छ जसले तपाईंको शरीरमा जमेको बोसोलाई कम गर्न सहायोगी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ ।
जोन होपकिन्समा डायटिशियन क्रिस्टी विल्यम्सका अनुसार इन्टरमिटेन्ट फास्टिङका थुप्रै प्रकार छन् र डाक्टरको सल्लाहमा नै यो सुरु गर्नुपर्छ ।
यसमध्ये एक हो १६/८ जसमा तपाईं दिनको १६ घण्टा खानाबाट टाढा बस्नुहुन्छ र बाँकी ८ घण्टामात्रै खाना खानुहुन्छ । उनका अनुसार धेरैजसो मानिस यो योजना रुचाउँछन् किनभने उनीहरुले लामो समयसम्म यो अनुसरण गर्न पाउँछन् ।
इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको दोस्रो प्रकार हो ५/२ को योजना ।
यो तरिका अपनाउनेहरुले पाँच दिन सामान्य खाना खान सक्छन् तर हप्ताको दुई दिन शरीरले ५ सय देखि ६ सयबीच क्यालोरी प्राप्त गर्ने खाना मात्रै खानुपर्छ । यसमा याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने दुई दिनको बीचमा एउटा सामान्य इटिङ डे (सामान्य दिन झैं खाना खानुहोस् ) भने पक्कै हुनुपर्छ ।
उनी भन्छिन्, ‘यदि तपाईं बर्गर र पिज्जा खाइरहनुभएको छ, चिनीयुक्त खानेकुराको सेवन गरिरहनुभएको छ भने तपाईंको शरीरमा के असर होला । त्यसैले यो अवधिमा तपाईंले सही र सन्तुलित भोजन गर्न आवश्यक छ । ’
डा. शिखा पोषक भोजनको पैरवी गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘इन्टरमिटेन्ट फास्टिङमा कहिले खाने भन्ने विषयमा कुरा हुन्छ तर के खाने, यसबारे खासै चर्चा हुँदैन ।’
गम्भीर संकटमा फसे कपिल शर्मा, शोविरुद्ध पर्यो उजुरी